आमासंग मिलेर ८ वर्ष देखि आफ्नै दाईले गरे बहिनीलाई…. – AB Sansar
आमासंग मिलेर ८ वर्ष देखि आफ्नै दाईले गरे बहिनीलाई….
September 30, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on आमासंग मिलेर ८ वर्ष देखि आफ्नै दाईले गरे बहिनीलाई….
एजेन्सी । भारतको लखनऊमा एक दाईले आफ्नी नाबालिग बहीनीलाई ८ वर्ष देखि सो च्नै नसकिने का म गर्दै आएको र ह स्य खुलेको छ । अझ थप अनौठो त के भने त्यो कुरा उनीहरुको आमालाई पनि थाहा थियो । छोरीले आमालाई आफ्नो दाईले नै य स्तो न रा म्रो काम गरिरहेका छन् भनेर सुनाउँदा आमाले उल्टै दाईलाई साथ दिइन् ।
ति बालिकालाई थाहा छैन दाईले कहिले देखि त्य स्तो गर्दै आएका थिए । उनलाई ८ वर्ष देखिको भने कुरा याद छ ।उनलाई नाबालक अवस्था देखि नै आफ्नो घरमा त्यस्तो सो च्नै नसकिने का म हुँदै आउँदा पनि आमाले आफुलाई साथ दिनुभन्दा पनि दाईलाई नै साथ दिएपछि अहिले ति किशोरी प्रहरीकहाँ पुगेकी छन् ।
उनले आफु माथि भएको घटनाका बारेमा बताएपछि प्रहरी पनि छक्क परेको छ ।उनको उ जु री सुन्ने बित्तिकै डिएसपी सहित अन्य प्रहरी अधिकारीको टोलीले उनकी आमा र दाईलाई प’क्राउ गरी घ’टनाको अ नु स न्धान सुरु गरेको छ ।अहिले ति किशोरी १६ वर्षकी भएकी छन् । उनले आफुलाई सानै उमेर देखि य स्तो का म हुँदै आएको जानकारी प्रहरीलाईइ दिएकी छन् ।
अचम्मको कुरा त के छ भने किशोरीकी आमा एउटी नर्स हुन् । नर्स आमाले सबै कुरा थाहा पाएर पनि चु प लागेर बस्नु भने पछि उनी प्रहरी कहाँ न्या य खोज्न गएकी हुन् । दाईले पनि यो कुरा सार्वजनिक गरे ज्या न लि ने ध म्की दिएका थिए ।
Breaking news : बैतडीमा शव बोकेको जिप दु’र्घटना, ४ जनाको मृ’त्यु ६ जना घा’इते
लामोसमय पछि सर्वसाधारणका लागि आयो अत्यतै खुसीको खबर, बल्ल बाँच्ने आशा पलायो ?